Inona no Atao hoe Efitrano Fanjakana?
Ny Tilikambo Fiambenana | Mey 2010
HAMAKY AMIN'NY TENY Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina (Andrefana) Boligara Cebuano Chichewa Cinghalais Danoà Efik Espaniola Estonianina Failandey Frantsay Grika Géorgien Hiligaynon Holandey Hongroà Ibo Iloko Indonezianina Iokrenianina Italianina Japoney Kantôney Nentim-paharazana Koreanina Kroaty Letonianina Lingala Litoanianina Malagasy Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Myama Norvezianina Poloney Portogey (Brezila) Quechua (Ancash) Romanianina Rosianina Samoanina Sepedi Sesotho (Lesotho) Setswana Sinoa Kantôney Notsorina Slovaky Slovenianina Soedoà Sranan Tongo Swahili Tagalog Tailandey Tiorka Tseky Tsonga Vietnamianina Xhosa Zoloa
Ny toeram-pivavahan’ny Vavolombelon’i Jehovah no atao hoe Efitrano Fanjakana. An’aliny ireny trano ireny eran-tany. Maherin’ny 105 000 ny fiangonan’ny Vavolombelon’i Jehovah mivory ao amin’izy ireny isan-kerinandro.
Misy efitra lehibe ny Efitrano Fanjakana rehetra, mba hanaovana fianarana Baiboly sy lahateny. Matetika izy ireny no misy lampihazo, ka avy eny no itarihana ny fivoriana. Misy seza ho an’olona 100 ka hatramin’ny 300 ny efitrano iray. Mety hisy birao sy efitra hafa misy seza fanampiny koa ilay izy. Matetika koa ao no ahitana fitehirizam-boky kely, misy boky ara-baiboly sy boky hafa, izay azon’ny mpivory anaovana fikarohana.
Tsy toy ny fiangonan’ireo Fivavahana Milaza Azy ho Kristianina anefa ny Efitrano Fanjakana, satria tsy ahitana alitara, na sary masina, na lakroa, sy ny toy izany. Fa nahoana? Satria mino ny Vavolombelon’i Jehovah fa ny fampiasana an’ireny dia mifanohitra amin’ilay didy ao amin’ny Baiboly hoe: “Andosiro ny fanompoan-tsampy.” (1 Korintianina 10:14; Jaona 4:24) Voaravaka sy mirenty be ny fiangonana sy tempoly maro. Ny Efitrano Fanjakana kosa tsotra, ary tsy nasiana zavatra tsy dia ilaina. Tsy ilay trano mantsy no tena tiana hasongadina fa ny fampianarana Baiboly atao ao.
Nahoana no natao hoe Efitrano Fanjakana ny anaran’ilay trano? Satria fianarana Baiboly no tena atao ao, ary ny “fanjakan’Andriamanitra” no asongadina amin’izany satria izay no tena notorin’i Jesosy. (Lioka 4:43) Noraisina àry ilay anarana hoe Efitrano Fanjakana, taorian’ny 1930. Mety tsara io anarana io, satria ny antony nanaovana an’ireny trano ireny dia mba hampandrosoana ny fivavahana marina sy ny fitoriana ny “vaovao tsaran’ilay fanjakana.” (Matio 24:14) Tsy natao hampiasaina amin’ny asa sosialy na varotra na fialam-boly àry ny Efitrano Fanjakana. Azo tamin’ny fanomezana an-tsitrapo avokoa ny vola nanorenana sy ikojakojana azy ireny, ary isahanana ny fandaniana rehetra. Tsy misy rakitra tantazana mihitsy any. Misy toerana manokana kosa efa nasiana boaty, ho an’izay te hanome vola.
Mitovy ny fomba ampiasana ny Efitrano Fanjakana rehetra eran-tany. Tsy mitovy kosa ny habeny sy ny endriny, arakaraka ny faritra. Miankina amin’ny toetany sy ny fitaovana misy, ary ny vola ananan’ny Vavolombelona eo an-toerana mantsy izany. Vita amin’ny biriky na hazo na vato, ohatra, ny efitrano sasany. Ao koa ny vita amin’ny volotsangana sy tafo bozaka. Ny hafa indray tsisy rindrina.
Azon’ny rehetra atrehina ny fivoriana any amin’ny Efitrano Fanjakana, na aiza na aiza. (Hebreo 10:25) Misy lahateny ho an’ny besinimaro any, isan-kerinandro. Manazava foto-kevitra ara-baiboly ilay izy, ary natao ho an’ny efa mpivory sy ny vaovao. Mba tongava àry any amin’ny Efitrano Fanjakana akaiky anao e!
Hizara Hizara Inona no Atao hoe Efitrano Fanjakana?
w10 1/5 p. 31
Fa Nankaiza Andriamanitra?
Fa Manao Inona Andriamanitra?
Inona no Azo Atao mba Hanampiana An’ireo Maty Vady?
Mijoroa Amin’ny Hevitrao!
Momba ny Fanarahana ny Diany
TOROHEVITRA HAHASAMBATRA NY FIANAKAVIANA Ampio ny Zanakao mba Hahay Handray Andraikitra
Anaran’i Jehovah tao Amin’ny Tempoly Ejipsianina
Torina any Amin’ireo Nosy Farany Lavitra ny “Vaovao Tsara”
“Fo Torotoro sy Kivy”, Mitady Famelan-keloka
MANONTANY NY MPAMAKY Inona no Atao hoe Efitrano Fanjakana?
Soratra Fandikana boky NY TILIKAMBO FIAMBENANA Mey 2010
Hizara Hizara NY TILIKAMBO FIAMBENANA Mey 2010
NY TILIKAMBO FIAMBENANA Mey 2010
Maninona no tsy hoe Fiangonana no Iantsoan’ny Vavolombelon’i Jehovah ny Toerana Ivavahan’izy Ireo?